प्रकाशित मिति : : आइतवार, जेष्ठ २०, २०७५
फेसबुकले यतिबेला वेलायती प्रयोगकर्तालाई नयाँ सूचना जारी गरेको छ। ‘कृपया तपाइँ आफ्नो नांगो फोटो हामीलाई पठाउनुहोस्’, फेसबुक भन्छ। प्रयोगकर्तासँग फेसबुकले किन मागिरहेछ यस्ता तस्विर?
बदलाको भावनाबाट सामाजिक सञ्जालमा अन्तरंग क्षणका तस्विर पोष्ट गर्दै ‘ह्यारेसमेन्ट’ गरेका घटना बढ्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न फेसबुकले नीति परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको हो। त्यसालाई रोक्ने प्रयासस्वरुप फेसबुकले तपाइँको नांगो तस्विर माग गरेको हो।
फेसबुकले नग्न तस्विरबारे अरु धेरै उल्लेख गरेको छैन तर प्रयोगकर्ताको विश्वास जित्ने प्रयासस्वरुप यो नीति ल्याएको देखिन्छ। के तपाइँ फेसबुकले भन्दैमा आफ्नो अन्तरंग तस्विर पठाउन तयार हुनुहुन्छ? फेसबुकलाई पठाएको तस्विर उसले दुरुपयोग गर्दैन भनेर तपाइँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? कतिपयले प्रयाेगकर्ताले फेसबुकप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्।
यदि तपाइँ कसैले तपाइँको गोप्य तस्विर पोष्ट गर्दिनसक्छ भनेर आत्तिइरहनु भएको छ वा निरास हुनुहुन्छ भने फेसबुककाे याे नीति सहयाेगी हुन सक्छ। प्रतिशाेध लिन पाेष्ट भएका नग्न तस्विर पहिचानपछि त्यस्ता अकाउन्ट ब्लक गर्दिने एवं फाेटाे पाेष्ट नहुने बनाइदिनेछ।
फेसबुकले यही किसिमको कडाई बालबालिका दुर्यव्यवहारका तस्विर पोष्टिङमा पनि गर्दैछ। बालबालिकाको दुर्यवहार तस्विर पोष्टमाथि फेसबुकले सबैभन्दा पहिले अष्ट्रेलियामा कडाई गरेको थियो। अब वेलायत, अमेरिका तथा क्यानडामा यो नीति लागू भएकाे छ। विस्तारै यसलाई विश्वका अन्य मुलुकमा विस्तार गर्ने याेजनामा फेसबुक छ।
सबैभन्दा पहिला यदि तपाइँ आफ्नो कुनै तस्विरबाट हैरान हुनुहुन्छ भने फेसबुकले आफ्नो पार्टनरसँग कुराकानी गर्न सल्लाह दिनेछ। सम्वादबाट समस्या समाधान नभए फेसबुकले अरू उपाय बताउनेछ। वेलायतमा फेसबुकले प्रतिशोधका कारण पूर्व पार्टनरको नांगो तस्विर पोष्ट गर्ने क्रम बढेपछि विशेष हेल्पलाइन नै स्थापना गरेको छ। हेल्पलाइनमा उजुरी आएपछि स्टाफले फेसबुकलाई सम्पर्क गर्छन् र एउटा लिंक पठाउछन्। फेसबुकले सो लिंकमा फोटो अपलोड गर्न आग्रह गर्छ।
निर्वस्त्र तस्विर कसले हेर्छ ?
फेसबुकको ग्लोबल मुख्यालयका अनुसार त्यसरी आउने निर्वस्त्र तस्विर पाँच व्यक्तिले हेर्नेछन्। यी पाँचै जना तालिम प्राप्त समीक्षक हुन्छन्। सबै फोटोको एक खास डिजिटल फिंगरप्रिन्ट बनाइन्छ। त्यसरी बन्ने डिजिटल फिंगर प्रिन्टलाई ह्यास भनिन्छ।
यसपछि डाटाबेसका लागि एक कोड स्टोर गरिन्छ। यदि कसैले सोही फोटो अपलोड गर्ने प्रयास गरेमा कोडले सो तस्विर पहिचान गर्छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम तथा मेसेन्जरमा आउनुभन्दा अगाडि नै ब्लक गरिदिन्छ। यो आइडियाले काम गर्ने नगर्नेबारे फेसबुक आफैँ ढुक्क भने छैन। यदि फोटोलाई तलमाथि गरेर पोष्ट गर्ने प्रयासमा गरेमा त्यो सम्भव हुनेछ। फेसबुकले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन काम गरिरहेको छ। -एजेन्सी